महिनावारी गडबडी हुने यस्ता छन् कारणः जानी राखौं « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
महिनावारी गडबडी हुने यस्ता छन् कारणः जानी राखौं
१२ पुष २०७५, बिहीबार २१:३० मा प्रकाशित
महिनावारी गडबड हुने समस्या धेरै किशोरीलाई हुन्छ । यसमा आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति नभएको स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. उर्मिला कार्की बताउँछिन् । हार्मोनको असन्तुलनका कारण यस्तो भएको डा. कार्कीले बताइन् ।
उनका अनुसार इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले उत्सर्जन गर्ने हार्मोनको सन्तुलन बिग्रिए महिनावारी गडबड हुन्छ । कहिलेकाहीँ खानपान तथा बसाइ सराइका कारण पनि महिनावारी गडबड हुन्छ । पोषण तथा सन्तुलित खानाको अभावमा महिलाहरू कमजोर हुन्छन् साथै धेरै मोटाउँदा तथा दुब्लाउँदा पनि शरीरमा महिनावारी गराउने तत्व घटबढ भै महिनावारी अनियमित हुन्छ ।